Hubka ay diyaarddu sidaa waa kuwii lagu duqeeyey Daraawiishta
Soomaali goormay xusi doonaan Soomaalidii Diyaaraddii ugu horaysay ee Afrika lagu weeraray oo dusha lagu duqeeyey , oo maydadkoodii yar iyo weyn dhulka la waray ? goormayse magacyadooda la qorayaa sida jiilka soo socdaa ay u ogaadeen taariikhda Halgamayaashan dhiigooda u daadiyey xornimadeena , inta Sheekadii Allah u naxariistee Maxamed Siyaad Bare uu niyadda ugu dhisaayey Soomaalida la buun buuninayo.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah ha u naxariistee Maxamed Siyaad Bare oo ku guulaystay qoritaankii af Soomaaliga, ayaa ardaddii ugu horaysay sanadkii 1972 ee uu ku carbinayey, Soomaalinimada, dal jacaylka, taariikhdoododda , halgankii gobonimadoonka iyo la dagaalankii gumaystahii xornimada laga qaatay , ayaa waxa uu amray in la qoro sheeko la mid ah sheekada caruurta reer galbeedku aamnisan yihiin oo ay aadka u jecel yihiin ee khiyaaliga ah ee lagu magcaabo Santa, hase ahaatee Dadka waaweyni ay ogyihiin inaanay waxba ka jirin oo mana awaal tahay in Santa Hadyado Caruurta uga soo qaado samada.
Dhalinyaradan lagu qoray manhajkii afka Soomaaliga, oo ahayd taariikh aan la turjumin oo loo ekaysinayey taariikhada caalamka intiisa kale caroortooda loo dhigo , ayaa dhalinyaradani intooda badani ayna Waqooyiga u soo dhaafin Kaantaroolka Balcad ee Gobolka Shabeelaha dhexe , boqolkii sagaashan iyo shan ma soo dhaafin kantaroolka magaalada Baledweyn, ee gobolka Hiiraan looga aado waqooyiga Soomaaliya . Halka hal Qof oo ka mid ahaa uu Kantaroolka Gaalkacayo ee Gobolka Mudug waqooyiga u soo dhaafay. Isaga oo soo gaaray Gobolka Bari
Gobanimadoonkii Soomaaliyeed ee cirka laga duqeeyey, ma jiro qof Soomaaliyeed oo yaqaana maanta magacyadooda. Ma jirto maalin la xuso. Soomaalida inteeda badani ma yaqaaniin Degaanadii ay diyaaradahani duqeeyeen. Ma jiro maanta Dugsi Hargaysa iyo Muqdisho ku yaala oo lagu xusay ama loogu magac daray halgamaa Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Gobanimadoonkii Soomaaliyeed ee Daraawiishta. Garowe, iyada waxa ku yaala Dugsiyo loogu magac daray Gobanimadoonkii Daraawiishta sida Goobdoon
Waxa jiray geesiyo Soomaaliyeed oo Tooreeyo iyo Mindiyo kala hortagey hubkii casriga ahaa ee waqtigaa Gumaystuhu ay wateen. Qaarkood waxay dileen taliyaashii Ciidanka Gumaystaha watay sida Koofil. Ma jiro Soomaali yaqaan nimankii falkaa geesimada ah sameeyey magacyadooda , Lakiinse waxaan maanta aynu xusnaa oo buun buunina Allah ha u naxariistee waa Dhalinyaro dharka reer galbeedka ku labisnaan jirtay oo baarka 999 Villa Roma ee Xamer weyne ku wada sheekaysan jiray galabtii iyaga oo ku wada cabaya Cappuccino.
Ugu danabyantii Allah ha u naxariisto dhamaan intii u dhimatay halgankii Soomaaliyeed loogu doonayey xornimada meel kasta oo ay Soomaaliya ka joogeen ama ka dagaalamayeen . Hase ahaatee waxa u baahan in lays waydiiyo haddii la xusayo maalinta Dhalinyarada u badnayd Koonfurta Soomaaliya in sidoo kale la xuso halgamayaashii Daraawiishta oo iyagana maalin loo sameeyo, ama maalinta 15 May laga dhigo maalintii halgamayaasha Soomaaliyeed oo iyaga oo aan la kala saaryan. Maanta magaalo ka mid ah Soomaaliya waxa laga abaabulayaa xuska Maalinta dhalinyarada, waxaana lagu qabanayaa Dusiga loogu magac Bullo oo ka mid ahayd jabhadihii dalka burburiyey . Sida wax u socdaan Bullo iyadana oo dhowr iyo tobon sano ka dib waxaan ku xusi doonaa Halgamad. In badan oo Soomaali ka mid ahna waa qiiroon doontaa
← Guddoomiyaasha labada Aqal oo ku soo jeeda Muqdisho Xoojinta Afka- Soomaaliga →
2 thoughts on “Daraawiish iyo SYL yaa Soomalai xoreeyey?”
Ahmed Somalilander May 15, 2020 at 09:54
Adiga laftar kagu wad lunsantahay maxa kagalay somalia iyo konfur mida kale darawishta maxad ula cararaysa Somalia iyo konfur oo aad ugu khasbaysa iyaguba sababta ay syl uu xusayan oo ay darawishta uu xusi wayen waa ogyihin inanay darawish shaqo ku lahayn konfur taasi waa taa tan kale waxa weeye darawishtu meel ay xoreysay majirto oo wala yaqan inay jaben lkn ka been sheegi mayn0 oo way isku dayen inay wax xoreyan lkn gadaal ayey wax ka biiyeen lkn shar iyo khyr kay doontaba darawishta waa tariikh Somaliland ee Somalia syl-teeda ayey ku qanacsantahe ee ha khasbin dee
Somali galbeed May 15, 2020 at 11:43
DARAAWIISH WAXAY KA DAGAALANTAY, SOMALI GALBEED, SIDA JIGJIGA, WARDHEER, KOONFUR, SIDA XARUNTA DARAAWIISH EE BALADWEYN, QALCADII AYL ,EE GOBOLKA NUGAAL OO AHAYD XARUNTII UGU HORAYSAY EE DARAAWIISH INTAAN TALEEX LA DAGIN MUDO 10 SANO AH DADKAAN TAARIIKHDA AQOON DARAAWIISH WAXA LAGA TAQALUSAY KA DIB MARKII LAGA ADKAADAY DAWLADII CAAWINAYSAY EE CUSMAANIYIINTA 1919 ,WAXAANA LAGA QABSADAY DHAMAAN JASIIRADA CARABTA, DAGAALUNA WUXUU GALAY GUDAHA INTA HADA LOO YAQAAN TURKEY, NIMAAN TAARIIKH HAYNI YAANU KUU TAARIIKHAYN
SYL WAA KARAANIYADII KA AFLAXAY TALYAANIGA MARKII DAMBANA QABYAALADA DADKA DHEX DHIGAY SI XUKUNKA U HAYSTAAN, SIYAAD BARANA CHANCE KA SIIYAY 123 XILDHIBAAN OO SOOMALIYA LAHAYD 122 BAA SYL QAADATAY HALKA SOO HADHAY WUXUU AHAA A/RISAAQ XAAJI XUSEEN OO DIIDAY CAQLIGAA JABAN..